‘जीन्दगी यो फूलैफुलको थुङ्गो हुँदैन’– गितका रचनाकार राजनसंग पांच प्रश्न « Everestleaks – Nepal's Popular Digital NewsPaper
‘जीन्दगी यो फूलैफुलको थुङ्गो हुँदैन’– गितका रचनाकार राजनसंग पांच प्रश्न
१९ माघ २०६१ को शाही ‘कु’ विरुद्ध काठमाडौंका सडकहरुमा चर्काे भाषण गर्ने विद्यार्थी नेता राजन राई तत्कालीन सात दलका प्रमुख नेताहरुसंगै जेलमा कोचिए । तीन महिनापछि जेलबाट छुट्नासाथ अनेरास्ववियु जनआन्दोलन परिचालन समितिको संयोजक बनेर दोस्रो जनआन्दोलन सफल पार्न सहयोग पुरयाए । जनआन्दोलन सफल बनाएर गाउं फर्केका राजन ‘किन–किन’ एल्बममार्फत पुन साँगीतिक क्षेत्रबाट पो उदाए । उनले लेखेको ‘………जीन्दगी यो फूलैफुलको थुङ्गो हुँदैन……….’ गीत खूब चर्चामा आएपछि एमाले खोटाङ जिल्ला सचिब समेत रहेका राजन गीत लेखनमा व्यवसायिक बनेका छन् । दुर्गम जिल्लामै रहेर उनले निकालेको दोस्रो एल्बम ‘ऐठन’ ले पनि राम्रै बजार पाएपछि तेस्रो एल्बमका लागि हौसिएका छन् । बाघबजारमा भेटिएका उनि सित टुडिखेलको सांगितिक जम्काभेट :–
गीत लेखनमा कसरी लाग्नुभो ?
शुरुमा रहरले गीत लेखियो । लेख्दै जांदा अञ्जु पन्तले गाएको ‘जीन्दगी यो फूलैफुलको थुङ्गो हुँदैन……….’ गीत लोकप्रिय बन्यो । जसले बर्षाै नपाएको प्रसिद्धि मिल्यो । २५ वर्ष गरेको राजनीतिमा भन्दा धेरै मानिसले मलाई चिन्यो । गायिका अञ्जु पन्तले नै अत्यन्तै मन परेको गीत भन्दै अन्तर्वार्ता दिन थालेपछि मेरो ट्रयाक नै परिवर्तन भयो । र, म व्यवसायिक गीतकार बन्न पुगेँ ।
भनेपछि तपाइँ गीतकार बन्नमा अञ्जु पन्तको देन छ ?
काठमाडौंमा बसेर गीत लेख्नेहरु धेरै छन् । साँगीतिक आकाशमा पछिल्लो समय छाएकी गायिका अञ्जु पन्तले पनि ४५ सय बढी गीत गाएकी छिन् । त्यसमध्ये गाउँमा बसेर मैले लेखेको गीतलाई नै उनले उत्कृष्ठ भनिदिएपछि ममा उत्साह बढेको हो । त्यसकारण, उनको देन छ भन्न कञ्जुस्याइँ किन गर्नु र !
गीत लेखेर बाँच्न सकिएला जस्तो लाग्छ ?
कुनै त्यस्तो क्षेत्र छ जस्तो लाग्दैन, जहां ढुक्कले बांच्न सकिन्छ । गीत लेखन पनि त्यस्तै एउटा क्षेत्र हो, जुन क्षेत्रमा पनि संक्रमण छ । अहिले श्रोताहरु बढेका छन् । तर, पारिश्रमिकले सताइरहेकै छ । गाउंमा बसेर समाचार सुन्छु, कलाकारिता क्षेत्रका लागि खुलेका संस्थाहरु यसका लागि लडिरहेका छन् । उनीहरुको त्यो संघर्षमा भौतिक नभएपनि नैतिक समर्थन गर्छु । आसा गरौं, गीत लेखेर पनि सम्मानित बांच्न सकिने अवस्था सृजना हुनेछ ।
कलाकारितामा जम्न धेरै कलाकारहरु काठमाडौंमै बस्छन्, तपाई गाउंमा हुनुहुन्छ । तपाईले कसरी बुझ्नुहुन्छ, केन्द्रले मोफसललाई हेर्ने दृष्टिकोण ?
मोफसल भन्ने शब्द उर्दूबाट आयो । मोफसल भनेको केन्द्रको पहुच भन्दा टाढा हो । तुलनात्मक रुपमा शहरलाई जति नजिकबाट नियाल्छ, मोफसल केन्द्रबाट टाढा हुन्छ । यसबाट कलाकारिता मात्रै होइन, पत्रकारिता, राजनीति, विकास जस्ता हरेक क्षेत्र पीडित छन् । केन्द्रबाट पाउने सेवा, सुविधा र अवसरबाट मोफसल सँधै बञ्चित हुन्छन् । यो संसारभरकै समस्या हो । हामी राज्य पुनसंरचनाको चरणमा छौं, यसको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन जरुरी छ ।
तपाई राजनीतिमा हुनुहुन्छ अनि गीतकारका रुपमा पनि स्थापित हुनुभयो । कसरी चिन्ने ?
थाहै नपाई विद्यार्थी राजनीतिमा लागें । २५ बर्षे राजनीतिक जीवन पूरा गरेछु । अहिले पनि पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता हुँ । नेपाली जनताको सामाजिक परिवर्तनका लागि राजनीतिमा लागेको हुँ । फेरी, राजनीति सेवाको क्षेत्र हो । तर, साँगीतिक क्षेत्रमा मेरो दायरा फराकिलो बन्यो । गीत सुन्दा श्रोताले राजनीतिक कार्यकर्ताका रुपमा होइन, गीतकारका रुपमा चिन्छन् । मैले पनि विभिन्न विधाका गीत लेखेको छु । अहिले पनि निरन्तर लेखिरहेको छु । यसर्थ, गीत लेखन र राजनीति संगसंगै अघि बढाउंछु ।